newsare.net ‘प्रदेशको नाम र राजधानी सर्वसम्मत हुने सम्भावना छैन’ : मन्त्री कार्की - newsare.net
खोटाङ मंसिर–५, एक नम्वर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कार्कीले प्रदेशको नाम र र
खोटाङ मंसिर–५, एक नम्वर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिकमत कार्कीले प्रदेशको नाम र राजधानी सर्वसम्मत नहुने बताउनुभभएको छ । मंगलबार साँझ खोटाङ आइपुग्नु भएका मन्त्री कार्कीले बुधबार दिक्तेलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा एक नम्वर प्रदेशको नाम र राजधानी सर्वसम्मत हुने सम्भावना नरहेको वताउनुभयो ।मन्त्री कार्कीले बिभिन्न चार/पाँच वटा नाम प्रस्तावमा आएकाले बढिभन्दा बढिको सहमतीमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाइने बताउनुभयो । प्रदेशका लागि सगरमाथा, कोशी, किरात, लिम्बू, मेची, बिराट लगायतका नाम आएकाले सबैभन्दा बढिको पहिचान बोक्ने, सबैभन्दा बढिले रुचाउने र सबैभन्दा बढिको निकट हुने खालको नामबाट नामाकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको राजधानी बनाउने नाममा खेतीयोग्य जमिन तथा जंगल मास्ने काम नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै, मन्त्री कार्कीले एक नम्वर प्रदेशमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा चयन गरेको जनाउनुभएको छ । उहाँले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने, कृषिलाई व्यवसायिकरण तथा बैज्ञानिकीकरण गर्ने वताउनुभयो । कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्ने, कृषिको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषिलाई रोजगारमुलक क्षेत्रका रुपमा बिकास गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री कार्कीको भनाई छ । दोश्रो प्राथमिकतामा धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका कुरा, तेश्रोमा जलश्रोत र चौथोमा औद्योगिक क्षेत्रको बिकासलाई प्राथमिकता दिने उहाँले सुनाउनुभयो । अर्को प्रशंगमा मन्त्री कार्कीले नेकपाको एकता बिलम्बमा पार्टी केन्द्रीय कमिटि जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ । ठूलो पंक्तीका नेता व्यवस्थापनकाक्रममा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने, नेताको कार्यव्यस्तता लगायतका कारण पार्टी एकतामा बिलम्ब भएको मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । उहाँले ६ महिना लम्बिएको एकता प्रकृया यो महिनाभित्र टुंगिने दाबी गर्नुभयो Read more
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पर्सा जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा आफ्नो एक्स्टेन्सन काउन्ट�
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पर्सा जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा आफ्नो एक्स्टेन्सन काउन्टर स्थापना गरेको छ । बैंकले प्रदेश नं २, पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगरपालिका वडा न. ३ स्थित मालपोत कार्यालयमा बुधबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा ल्याएको हो । शाखा कार्यालय वीरगंज मार्फत रहने सो एक्सटेन्सन काउन्टरबाट मालपोत कार्यालय पर्साबाट लिईने राजश्व, पूंजीगत लाभ कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगायतको रकम जम्मा गरिनेछ । शाखा कार्यालय वीरगंजका शाखा प्रवन्धक टिकाराज रिजालको अध्यक्षतामा भएको सो एक्सटेन्सन काउन्टरको समुद्घाटन बैंकका प्रदेश नम्बर २ का निमित्त प्रमुख विश्वप्रकाश ज्ञवालीले गरेका थिए… The post पर्सा मालपोत कार्यालयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर appeared first on Bizkhabar Online.
यूनिभर्सल र कामना सेवा विकास बैंकबीच सम्झौता, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालिब�
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पछि बैंकका प्रिपेड÷डेबिट कार्डका ग्राहकले यूनिभर्सलमा स्वास्थ्य उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउने भएका छन । बैंकका भैरहवा शाखाका शाखा प्रबन्धक तुलसी प्रसाद आचार्य र यूनिभर्सलका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अजय कुमार पिएसले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । बैंकले ८४ शाखा तथा ३९ एटिएम मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ। साथै बैंकले एबीबीएस, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, सिआश्वा लगायतका सेवा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । The post यूनिभर्सल र कामना सेवा विकास बैंकबीच सम्झौता, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । सनराईज बैंकले भक्तपुर स्थित गट्ठाघरमा आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । ब�
काठमाडौं । सनराईज बैंकले भक्तपुर स्थित गट्ठाघरमा आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भक्तपुर .स्थित गठ्ठाघरको चारदोबाटोमा उक्त शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको हो । बुधबार आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, बैकका संचालक दिपक नेपाल र बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशा राणा अधिकारीले संयुक्त रुपमा उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन । सो कार्यक्रममा बैंकका नायव महाप्रबन्धक अपछ कुमार यादव लगायत बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यो समेत गरी बैंकको शाखा संख्या १… The post सनराइज बैंकको नयाँ शाखा भक्तपुरको गट्ठाघरमा, शाखा संख्या १०६ पुग्यो appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगको स्�
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने भएको छ । जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाकीँ रहेका कम्पनीको हकमा समेत आयोगको स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । हालसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भएको भन्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही अनुरुप मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आयोग गठन भइसकेको हुँदा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम… The post जलविद्युतको आईपीओ निष्काशनमा विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति अनिवार्य, पुरानालाई पनि लागू हुने appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टचार गरेको प�
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित भएमा भुण्डिएर मर्न तयार रहेको बताएका छन । उनले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद अमनलाल मोदीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घुम्टो ओडेर भ्रष्टचार गरिरहेको आरोप लगाए पछि भ्रष्टाचार गरेको तथ्य पत्ता लगाउन चुनौती दिँदै भ्रष्टचारी ठहरीए आफू झुण्डिन तयार रहेको बताएका हुन । घिसिङले भने, ‘तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ६ महिनादेखि ३ किलोमिटर तार तान्न दिनु भएको छैन, यसले गर्दा मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेसनको चार्ज समेत गर्न सकेका छैनौं ।’… The post सांसदलाई थर्काउँदै कुलमानले भने, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नुस झुण्डिएर मर्न तयार छु, जथाभावी बोल्न पाईदैन’ appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम अर्थात हेलो नेपालले कर कार्यालय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावन
काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम अर्थात हेलो नेपालले कर कार्यालय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीका संचालक अजेयराज सुमार्गी पराजुलीले अदालतमा विचराधिन रहेको मुद्दाको विषयमा कर कार्यालयले अनावश्यक सुचना चुहावट गरेको र मुद्दालाई नै प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै कानुन बमोजिम अघि बढ्न चेतावनी दिएका छन् । ‘आयकर ऐनको दफा ८४ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा सुचना गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘ऐन विपरित करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेकाले ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १… The post कर कार्यालयलाई नै अजेय सुगार्मीको चेतावनी, करका हाकिमलाई ८० हजार जरिवाना र १ बर्ष जेल ! appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ विरुद्ध आन्दोल�
काठमाडौं । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रीने भएका छन । पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको नियमावलीले निर्माण ब्यवसायीको हकहित खोसेको तथा सरल रुपले काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गरेको भन्दै महासंघले आफुहरु विरोधमा उत्रनु परेको जानकारी दिएको छ । मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले संशोधनका केही बुँदाहरुमा आपत्ती जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले निर्माण ब्यवसायीहरुले काममा लापरवाही गरेकै कारण ठूला आयोजनाहरु अलपत्र पर्नुका साथै समयमै काम समेत हुन नसकेको भन्दै नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । निर्माण ब्यवसायीहरुले उक्त संशोधनमा कालो सुचीमा… The post सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रदै निर्माण व्यबसायी, लाईसेन्स सरकारलाई बुझाउने appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । आइएमई पे मोबाइल वालेट एपको ‘जे पे गर्दा पनि आइएमई पे’ सुविधा सार्वजनिक भएको छ । नेपाल रा
काठमाडौं । आइएमई पे मोबाइल वालेट एपको ‘जे पे गर्दा पनि आइएमई पे’ सुविधा सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त मोबाइल वालेट एप ‘आइएमई पे’ लाई आफ्नो फोनमा डाउनलोड गरी प्रमाणिकरण गरिएपछि बिजुली तथा खानेपानी, फोन, मोबाइलको रिचार्जलगायतको भुक्तानी गर्न सकिने छ । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास नाहाटाका अनुसार आइएमई पेको लक्ष्य भनेको मोबाइलबाट गरिने भुक्तानी वा मोबाइल वालेटको प्रयोगलाई सजिलो बनाउनु नै हो । प्रयोगकर्ताहरूलाई मध्यनजर गर्दै आईएमई पेले २०१९ को अन्त्यसम्म नेपालभर १ लाखभन्दा बढी स्थानहरूमा आइएमई पे… The post आइएमई पेको जेपे सुविधा सार्वजनिक, १ लाख भन्दा बढी स्थानबाट भुक्तानी गर्न सकिने appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वीच्याटमाथी प्रतिबन्ध लगाएको छ । वीच्याट, अलिपेजस्ता विदेशबाट ज�
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वीच्याटमाथी प्रतिबन्ध लगाएको छ । वीच्याट, अलिपेजस्ता विदेशबाट जारी भएका पेमेन्ट गेटवेबाट विदेशी मुद्रा अपचलन (हुण्डी) भएको भन्दै आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएको हो । विदेशी पेमेन्ट सिस्टमसँग प्रत्यक्ष आवद्ध भएका जुनसुकै क्युआर कोड,पस मेशिन तथा वीच्याट, अलि पेजस्ता विदेशी मुलुकबाट जारी भएका पस मेसिन सिस्टमको प्रयोग नगर्न समेत राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको छ । त्यस्तो पेमेन्ट गेटवेमार्फत कारोबार गर्नु गैरकानूनी घोषित गर्दै राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । यदि कसैले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाहेक वीच्याट, अलि पेजस्ता सामाजिक संजालमार्फत आर्थिक कारोबार… The post वीच्याटमाथी राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्ध, आर्थिक कारोबार गरे विदेशी मुद्रा अपचलन अन्तरगत कारबाही appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम अर्थात हेलो नेपाललाई ४ अर्ब ३१ करो�
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम अर्थात हेलो नेपाललाई ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्रचार गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो ७५ प्रतिशत स्वामित्व साईप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेजमार्फत टेलियासोनेरा कम्पनीलाई निसर्ग (बिलय) गरे वापतको लाभकर तिर्न पत्रचार गरेको हो । नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमको टेलियासोनेरालाई ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निसर्ग गराएकोमा सो वापतको पूँजीगत लाभकर ५ अर्ब ६३ करोडको २५ प्रतिशत रकम लाभकर तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । २५ प्रतिशत लाभकर बापतको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दाखिला नभएको हूँदा… The post अजेय सुमार्गीको हेलो नेपाललाई ४ अर्ब ३१ करोड पूँजीगत लाभकर तिर्न आन्तरिक राजस्वको पत्र appeared first on Bizkhabar Online.
जनता बैंक र ह्याम्स अस्पतालबीच सम्झौता, स्वस्थ्य उपचारमा विशेष छुट
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल र ह्याम्स अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष आरएस भण्डारी �
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल र ह्याम्स अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष आरएस भण्डारी र बैंकका टा«न्जेक्सन बैंकिङ प्रमुख पुकार सुबेदीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका परिवारहरुले उक्त अस्पतालमा स्वस्थ्य उपचार गराउँदा बिशेष छुट पाउने भएको छ । उक्त सुविधा लिन भने ग्राहकले बैंकको एटिएम कार्ड वा ग्राहक खुल्ने कुनै कागजपत्र पेस गर्नु पर्ने छ । The post जनता बैंक र ह्याम्स अस्पतालबीच सम्झौता, स्वस्थ्य उपचारमा विशेष छुट appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईवर विछ्याउने काम आजबाट स
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईवर विछ्याउने काम आजबाट सुरु गरेको छ । कम्पनीले जिम्मा पाएको प्रदेश नं १, २ र ३ का विभिन्न क्षेत्रमा अप्टिकल फाईवर विछ्याउने कार्यको सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उद्घाटन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङको गल्छीस्थित मासटारमा एक कार्यक्रममा टेलिकमको उक्त अप्टिकल फाईबर विछ्याउने कार्यको सिलान्यास गरेका छन । कम्पनीले जिम्मा पाएको उक्त ३ ओटै प्रदेशमा २ बर्षभित्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने गरी जिम्मा लिएको छ । उक्त ३ ओटै प्रदेशमा फाईबर विछ्याउन गत महिना मात्रै ३ ओटा कम्पनीलाई… The post गल्छीमा टेलिकमको अप्टिकल फाइबर शिलान्यास, धनकुटा र सिन्धुलीमा केवल विछ्याउन सुरु appeared first on Bizkhabar Online.
एनबीआइ र ज्योति विकास बैंकबीच सम्झौता, बैंकका कर्मचारीको अनलाईन परिक्षा
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ ईन्स्टिच्यूट र ज्योति विकास बैंक बीच एक सम्झौता भएको छ । सोमबार एक कार्यक�
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ ईन्स्टिच्यूट र ज्योति विकास बैंक बीच एक सम्झौता भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच ईन्स्टिच्युट र बैंक बीच ई–परिक्षासम्बन्धी सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार ईन्स्टिच्युटले त्रैमासिक रुपमा ज्योति विकास बैंकका ६ सय कर्मचारीहरुको लागी अनलाईन परिक्षा लिने भएको छ । उक्त सम्झौताले बैंकका कर्मचारीहरुमा अध्ययन गर्ने संस्कृती बसाल्न का साथै उनिहरुबीच बैंकिङ ज्ञान बढाउने कुराको स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक, रामहरी आचार्य र नेशनल बैंकिङ ईन्टिच्यूटका तर्फबाट वरिष्ठ… The post एनबीआइ र ज्योति विकास बैंकबीच सम्झौता, बैंकका कर्मचारीको अनलाईन परिक्षा appeared first on Bizkhabar Online.
एटिएम मेशिनमा नेपाली भाषा अनिवार्य, ३० दिनभित्र नगरे बैंकलाई कारबाही
काठमाडौं । एटिएम मेशिनमा अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषा राख्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था�
काठमाडौं । एटिएम मेशिनमा अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषा राख्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस अघि अंग्रेजी भाषामा एटिएम मेशिन राख्दै आएकोमा अबका दिनमा नेपाली भाषा पनि अनिवार्य गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । सेवाग्राहीहरुले एटिएम मेशिनमा नेपाली भाषा नहुँदा प्रयोग गर्न कठिनाई भएको भन्दै गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । सुचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरी कारोवार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयावधिसम्म पनि उक्त कार्य नगरेमा भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५… The post एटिएम मेशिनमा नेपाली भाषा अनिवार्य, ३० दिनभित्र नगरे बैंकलाई कारबाही appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । आईतबार बेलुकादेखि मोटरसाईकलको पछाडी बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने भन्ने चर्चा एकाए�
काठमाडौं । आईतबार बेलुकादेखि मोटरसाईकलको पछाडी बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने भन्ने चर्चा एकाएक चुलियो । २०६५ सालमा लागु गरिएको उक्त निएम पुनः ११ बर्षपछि लागु गर्न लागिएको भन्दै कोही यसको आलोचना गर्न लागे त कसैले सुरक्षाको हिसावले राम्रो पनि हो भन्ने निष्कर्श निकाले । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी बसन्त पन्तले आईतबार एक कार्यक्रममा मोटरसाईकलको पछाडी बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम ल्याउने भन्दै गर्दा चौतर्फी मिडियामा पनि यसको ठुलै चर्चा समेत भयो । तर २०६५ सालमा ल्याइएको उक्त नियम कसले कसरी ल्यायो र कसरी उक्त नियम पतन भयो भनेर कसैले… The post दुर्घटनाको प्रमुख कारण हेलमेट नै हो ?, विभागसँग सल्लाह नै नगरी कसरी चल्यो हल्ला, महानिर्देशक भन्छन यो सम्भव छैन appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्दै आईरहेको जेट एयरवेज बन्द भएसँगै हवाई टिकटमा कालो ब�
काठमाडौं । नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्दै आईरहेको जेट एयरवेज बन्द भएसँगै हवाई टिकटमा कालो बजारी बढेको छ । जेटएयर बन्द हुँदा टिकटमा अनावश्यक चाप देखाउँदै अन्तरराष्टिय उडान भर्दै आएका एयरलाईन्स कम्पनीहरुले सस्तोदरको टिकट लुकाएर कालोबजारी गर्न सूरु गरेका हुन । सामान्यतया काठमाडौं दिल्लीको हवाई भाडादर १५ देखी २० हजार रुपैयाँ भएकोमा हाल त्यसलाई वृद्धि गर्दै ६१ हजार रुपैयाँ पुर्याएको होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुको टिकट मूल्यमा अध्याधिक वृद्धि गर्दै सुरु गरेको कालोबजारीकरणका कारण भ्रमण बर्ष २०२० समेत प्रभावित हुने उनको… The post अन्तरराष्ट्रिय हवाई टिकटमा बढ्यो कालाबजारी, नियामक मुकदर्शक बन्दा भिजिट नेपाल २०२० लाई असर appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक स्थितीमा केही सुधार आएको बताएपनि शोधनान्तर घाटा भने बढेको छ । राष
काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक स्थितीमा केही सुधार आएको बताएपनि शोधनान्तर घाटा भने बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक बर्षको ९ महिनामा शोधनान्तर घाटा ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत आबको सोही अबधिमा शोधनान्तरघाटा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । चालू आबकै ८ महिनामा पनि यस्तो घाटा ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । यसैगरी सो अबधिसम्म आईपुग्दा चालु खाता घाटा थप विस्तार २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १ खर्ब… The post रोकिएन सोधनान्तर घाटा बढ्नेक्रम, खुम्चिदै विदेशी मुद्रा सञ्चिती appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । विदेशी पर्यटकले ९ महिनाको अवधिमा नेपालमा ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन । गत बर्�
काठमाडौं । विदेशी पर्यटकले ९ महिनाको अवधिमा नेपालमा ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन । गत बर्षको सोही अवधिमा भने ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ अनुसार विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्च गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष ४ अर्ब रुपैयाँले बढी रहेको छ । विदेशी पर्यटकले चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनासम्म आईपुग्दा ४७ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने ९ महिना सम्म आईपुग्दा ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन । तथ्याङक अनुसार अघिल्लो महिनामा ५… The post विदेशी पर्यटकमार्फत ९ महिनामा भित्रियो ५४ अर्ब, नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च ६८ अर्ब पुग्यो appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपालको पहिलो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भायनेट कम्युनिकेसन्सले ‘भायनेट क्रिकेट वल्�
काठमाडौं । नेपालको पहिलो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भायनेट कम्युनिकेसन्सले ‘भायनेट क्रिकेट वल्र्ड कप मेनिया’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले जेठ १६ गतेदेखि संचालन हुने क्रिकेट वल्र्ड कपलाई मध्यनजर गर्दै उक्त अफर सार्वजनिक गरेको हो । अफर अन्तरगत भायनेटका ग्राहकहरुले इन्टरनेट र टिभिको सेवा उपभोगमा अतिरिक्त स्पिड र भारी छुट प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन । इन्टरनेट र टिभिको वार्षिक ग्राहक बन्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले हरेक हप्ता लक्की ड्र मार्फत ६ हजार रुपैयाँ क्यास ब्याक र ४३ इन्चको एलजि स्मार्ट एलईडी टिभि जित्ने मौका प्राप्त गर्न सक्नेछन । विगत १९ वर्षदेखि… The post भायनेटको क्रिकेट वल्र्ड कप मेनिया अफर सार्वजनिक, लक्की ड्र मार्फत ४३ इन्चको टिभि appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । हजारौं नेपाली युवाहरु खाडीमुलुक जान आतुर र संघर्ष गरिरहेका बेला नेपाली ३ युवाले भने स्
काठमाडौं । हजारौं नेपाली युवाहरु खाडीमुलुक जान आतुर र संघर्ष गरिरहेका बेला नेपाली ३ युवाले भने स्वदेशमै केही गर्ने उद्देष्यले लन्ड्री उद्योग सुरु गरेका छन । वेलायत पुगेका एक नेपाली युवा स्वदेश फर्केर व्यवसाय गर्न थालेका बेला उनलाई अन्य २ जनाले साथ दिँदै उक्त उद्योग संचालनमा ल्याएका हुन । उदयपुर जिल्ला चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं. १० हँडिया घर भएका सन्तोषसिंह कार्कीले काठमाडौंको मनहरा फाँटमा लन्ड्रीपार्क नामक व्यवसायिक लन्ड्री सेवा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन । वेलायतको आकर्षक तलब समेत छाडेर ७ बर्ष पछि नेपाल फर्केका उनी आफ्नै देशमा केही गर्न चाहेको… The post बेलायतको आकर्षक तलब छाडेर नेपालमै उद्यम, ग्राहकको आँखै अगाडी लुगा धुने लन्ड्री संचालनमा appeared first on Bizkhabar Online.
जहाज भाडामा दिएसँगै हिमालय एयरले विमानस्थललाई बुझायो बक्यौता रकम, सौर्यले ५० लाख बुझाउँदै
काठमाडौं । हिमालय एयरले बक्यौता बापतको १ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई आईत�
काठमाडौं । हिमालय एयरले बक्यौता बापतको १ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई आईतबार बुझाएको छ । हिमालय एयरले आफ्नो एउटा जहाज भियतनाम एयरलाई भाडामा दिएसँगै विमानस्थललाई बक्यौता रकम बुझाएको हो । करिब २० करोड रुपैयाँ भन्दा माथी बक्यौता रकम बाँकी रहे पछि विमानस्थलले उक्त रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो । कम्पनीले भने आईतबार सटही हुनेगरी शुक्रबार १ करोड रुपैयाँको चेक दिएको विमानस्थल प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन । कम्पनी आर्थिक रुपमा संकट पर्दै गए पछि भियतनाम एयरलाई एउटा बेम्बो जहाज भाडामा पठाई सकेको छ । कम्पनीले लामो समय देखी… The post जहाज भाडामा दिएसँगै हिमालय एयरले विमानस्थललाई बुझायो बक्यौता रकम, सौर्यले ५० लाख बुझाउँदै appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखसम्म ३ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र�
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखसम्म ३ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि उक्त कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनरमण त्रिपाठीले लक्ष्यभन्दा १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँबढी राजस्व संकलन भएको जानकारी दिँदै वैशाख महीनामा मात्रै ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताएका छन । उक्त कार्यालयले आव २०७४/७५ मा ४८ करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको… The post आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन, १० महिनामा उठ्यो पौने ४ अर्ब appeared first on Bizkhabar Online.
पर्यटन मन्त्री नहुदा अन्योलमा निजगढ विमानस्थल, कहिले आउला सरकारको निर्णय
काठमाडौं । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा परिचित निजगढ विमानस्थल निर्माण अन्यौलमा पर�
काठमाडौं । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा परिचित निजगढ विमानस्थल निर्माण अन्यौलमा परेको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा उक्त विमानस्थलको काम अलपत्र परेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तरगतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रमुख प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिएका छन । उनका अनुसार उक्त विमानस्थलको हाल सम्म नीतिगत काम मात्रै भईरहेको र नयाँ ढङ्गबाट जान सरकारको निर्णय पर्खिरहेको भए पनि सरकारले उपयुक्त निर्णय दिन नसक्दा अलपत्र परेको हो । केही समय अगाडी कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले गरेको पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई परिमार्जित गरी नयाँ ढङ्गबाट जान आयोजनाले सरकारको निर्णय पर्खेको हो । तर अहिले सम्म सरकारले… The post पर्यटन मन्त्री नहुदा अन्योलमा निजगढ विमानस्थल, कहिले आउला सरकारको निर्णय appeared first on Bizkhabar Online.
नेपाल लाईफको साधारणसभाले पारित गर्यो ४८ प्रतिशत बोनस, अधिकृत पूँजी १० अर्ब पुर्याउने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना लगानीकताईलाई ४८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न�
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना लगानीकताईलाई ४८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । आज भएको कम्पनीको बार्षिक साधारणसाभाले यस अघि प्रस्ताव गरिएको लाभांस वितरण प्रस्ताव पारित गरिएको कम्पनीका संचालक कमलेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । साधारण सभाले लगानीकर्तालाई चुक्ता पूँजीको २३ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश र २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उक्त बोनस सेयर पारित भएसँगै नेपाल लाईफको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको… The post नेपाल लाईफको साधारणसभाले पारित गर्यो ४८ प्रतिशत बोनस, अधिकृत पूँजी १० अर्ब पुर्याउने निर्णय appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनीमा आज �
काठमाडौं । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनीमा आज आयोजित बुद्धपूर्णिमा तथा लुम्बिनी दिवस र लुम्बिनी भ्रमणवर्ष २०७६ शुभारम्भ कार्यक्रममा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सुरु भएको घोषणा गरेकी छिन । उनले संसारभरका बौद्धमार्गीलाई बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा घुम्न आउन समेत निमन्त्रणा गरेकी छिन । लुम्बिनीको विकासले प्रदेश नं ५ लाई समृद्ध बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनीलाई विश्वशान्तिको केन्द्र लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको बताए । स्थानीयवासीको सहयोग र सहकार्यलाईसँगै लिएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गुरुयोजना छिटो पूरा… The post लुम्बिनी भ्रमणवर्षको शुभारम्भ, राष्ट्रपतिद्वारा लुम्बिनी घुम्न निम्तो appeared first on Bizkhabar Online.
सनराइज बैंकको कामु सिइओमा आशा राणा, बैंकिङ क्षेत्रमा ३१ बर्षे अनुभव
काठमाडौं । सनराइज बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आशा राणा अधिकारी नियुक्त भएकी छि�
काठमाडौं । सनराइज बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आशा राणा अधिकारी नियुक्त भएकी छिन । बैंकको प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले प्रमूखको जिम्वेवारीबाट अबकास पाएसँगै राणालाई कामु प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन । यस अघि सोही बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकबाट प्रवेश गरेकी राणलाई जेठ १ गते देखीनै लागू हुने गरी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३१ बर्षभन्दा बढि समय विताएकी राणा नेपालको बैकिङ क्षेत्रको दोस्रो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेकी छिन् । उनले सनराईज बैंकमा ११ बर्ष विताईसकेकी छिन । राणसँग हिमालयन बैंकमा… The post सनराइज बैंकको कामु सिइओमा आशा राणा, बैंकिङ क्षेत्रमा ३१ बर्षे अनुभव appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफुहरुले कुनै पनि हालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगद धरौटी राखे
काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफुहरुले कुनै पनि हालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगद धरौटी राखेर ब्यासाय संचालन नगर्ने बताएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा ब्याज दिन नमानेपछि उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विभिन्न बाणिज्य बैंकमा नगद धरौटी राखेर चलनचल्तीको व्याज लिईरहेको बताउँदै आफुहरुले पनि सोही अनुरुप सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरको माग थियो । ‘अहिले सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकममा व्याज नदिनेभन्दै चलखेल गरिरहेको छ,’ व्यवसायीहरुको बृहत भेलामा एमाले समर्थित प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष सरोज पोखरेलले भने, ‘अब हामी सरकारसँग कुनै उधारो… The post सरकारलाई म्यानपावर व्यवसायीको चेतावनी, माग पुरा नगरे जेठ १७ बाट कामदार पठाउन बन्द appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । आगामी बजेटले व्यवसाय संचालनका लागि करमा भारी छुट दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले अघि सार�
काठमाडौं । आगामी बजेटले व्यवसाय संचालनका लागि करमा भारी छुट दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ । अहिलेको कर प्रणाली व्यवसायी मैत्री नभएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न माग गरेका छन् । आगामी बजेटका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल फ्रेड फरवार्डस एशोसिएशनले संयुक्त रुपमा सरकार समक्ष आफ्नो लिखित माग राखेका हुन् । उनीहरुले कर्पोरेट ट्याक्सलाई ५ प्रतिशतले घटाई व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा समेत बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसैगरी पछिल्लो समय देशमा लगानी योग्य पूँजीको अवभाव भएको भन्दै त्यसलाई… The post बजेटमा निजी क्षेत्रको संयुक्त सुझाव, कर छुटदेखि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न माग appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । त्रिशूली थ्री बी २२० केभी हब सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको अबरोध हटेको छ । स्थानीयले विभि
काठमाडौं । त्रिशूली थ्री बी २२० केभी हब सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको अबरोध हटेको छ । स्थानीयले विभिन्न माग राखी दुई दिनदेखि रहेको अबरोध हटेपछि शुक्रबारबाट निर्माण सुचारु भएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका —५ पहिरेबेसीमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम केही स्थानीयले नियतबस रोकेका थिए । त्रिशूली नदी किनारमा बनिरहेको सबस्टेसनमा रसुवाको उत्तरगया—४का केही स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार आयोजनाको निर्माणस्थल निरीक्षण गरेका थिए । नियतबस काममा अवरोध गरेको थाहा पाएपछि आक्रोशित भएका घिसिङले त्यहाँ जम्मा भएका स्थानीयलाई नाजायज माग राखी अबरोध गरेमा… The post त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणको अवरोध हट्यो, कुलमानले थर्काए स्थानीयबासीलाई appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिसूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिसूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । आयोजनाको ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत् बिहीबारबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नुवाकोटको किस्पाङ ५ सिम्ले स्थित स्विचयार्डको कन्ट्रोल रुममा रहेको स्विच दवाएर आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको घोषणा गरे । आयोजनाबाट परीक्षणको रुपमा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाको विद्युत् सिम्लेमा रहेको विद्युत्गृहबाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थ स्थिति सबस्टेसनमा जोडिएको छ । शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट पहिलो युनिटबाट परीक्षणका रुपमा लगातार ७२ घण्टा… The post माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो, भारतबाट हुने आयात घट्दै appeared first on Bizkhabar Online.
हिमालयन बैंक, पर्यटन बोर्ड र अमेरिकन एक्स्प्रेसबीच सहकार्य, कार्डबाहक पर्यटकलाई विशेष छुट
काठमाडौं । पर्यटन प्रवर्द्धनलाई लक्षित गरि हिमालयन बैंक, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अमेरिकन एक्स्प्रे�
काठमाडौं । पर्यटन प्रवर्द्धनलाई लक्षित गरि हिमालयन बैंक, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अमेरिकन एक्स्प्रेसको सहकार्यमा ‘एक्स्पेरियन्स नेपाल २०१९’ अभियान सुरु भएको छ । अमेरिकन एक्स्प्रेस कार्ड प्रयोगकर्ता विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न, यहाँको मौलिकता, विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यताको अनुभुति दिलाउने अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सहकार्य अन्तरगत अभियान अवधिभर नेपाल घुम्न आउने कार्डबाहक पर्यटकहरुले नेपालमा विभिन्न सुविधाका साथै हिमालयन बैंकको ८० भन्दा बढि मर्चेन्ट पार्टनरहरु होटल, रेष्टुराँ, साहासिक खेल पर्यटन, स्थानीय कलाकृति खरिदमा विशेष छुटहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । २०२० जुन सम्म चल्ने अभियानमा बोर्ड र एक्स्प्रेसले विभिन्न देशहरुमा… The post हिमालयन बैंक, पर्यटन बोर्ड र अमेरिकन एक्स्प्रेसबीच सहकार्य, कार्डबाहक पर्यटकलाई विशेष छुट appeared first on Bizkhabar Online.